Aubergines voarakitra amin'ny tononkalo voaendy, manankarena sy tsotra. | Recipe ao an-dakozia
Montse Morote | 27/05/2021 09:00 | Entries mafana, Starters mangatsiaka, Resety legioma
Tuna voaendy dia nameno aubergine, fomba fahandro tsotsotra, fomba iray hafa hihinanana aubergine. Ny eggnants dia tena mahasalama, legioma azo andrahoina amin'ny fomba maro ary misy karazana famenoana isan-karazany.
Androany aho dia manolotra anao aubergine voatanisa tuna, manankarena sy mora omanina, mety amin'ny fahavaratra, miaraka amin'ireo akora izay tian'ny fianakaviana manontolo.
Azonao atao ny manamboatra karazany hafa amin'ity fomba fahandro ity, atono azy amin'ny béchamel sy fromazy grated, asio mayonnaise fa tsy béchamel, matsiro ihany izy ireo. Azonao atao ihany koa ny manamboatra fitambarana hafa miaraka amin'ny volombava ary mametraka legioma toy ny tongolo nendasina izay mandeha tsara.
Fotoana hiketrehana: 40 M
3-4 kapoaka ny tuna
200 gr. voatabia nendasina
100 gr. fromazy grated
Mba hanomanana ireo aubergine voahidy tuna voaendy, dia hanomboka amin'ny alàlan'ny famelomana ny grill ao anaty lafaoro.
Apetrakay handrahoana rano ao anaty vilany misy atody miaraka amina rano ireo atody, avelantsika mandritra ny 10 minitra rehefa manomboka mahandro izy ireo. Rehefa vonona ny atody dia esory, avelao hangatsiaka, manosotra ary tehirizo.
Hetezo ny antsasaky ny aubergine, hanome fanapahana vitsivitsy sy menaka manidina izahay, hataonay ao anaty lafaoro mandra-pahatonga azy ireo hatsatsika.
Rehefa eo ny aubergine dia esorinay izy ireo ary ampian'ny sotro iray dia esorinay ireo aubergine, tandremo sao tapaka izy ireo.
Notetehinay ny henan'ilay baranjely, apetrakay ao anaty loharano izany.
Ampiana ny kapoakan'ny tuna, afangaro amin'ny aubergine.
Peel ary tapaho ny atody nandrahoina mafy, ampio ilay fangaro teo aloha.
Ampiantsika ny voatabia nendasina, ny habetsaky ny tsiro, afangaroinay tsara daholo.
Apetrakay ao anaty loharano ireo aubergine, fenoy ny famenoana izay efa nomaninay.
Mandrakotra ny aubergine amin'ny fromazy grated.
Apetrantsika ao anaty lafaoro ny aubergine ho gratin.
Rehefa eo ny fromazy dia mivoaka izahay ary manompo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » namany » Entries mafana » Tuna voaendy dia nameno aubergine
Tsiry karaoty vita amin'ny mikrô